कलिला केटीको रगतले स्नान गर्ने काउण्टेस एलिजाबेथ – Nayapath.com
के एलिजाबेथ बेथरी वास्तवमै सयौं निर्दोष किशोरीलाई यातना दिने र मार्ने गर्थिन त ? या शक्तिशाली व्यक्तिले सम्पत्ति पाउनका लागि उनीमाथि लगाएको झूटो आरोप हो यो ?
काउन्टेस एलिजाबेथ बेथरीको जन्म सन् १५६१ मा हँगेरीको उच्च खानदानमा भएको थियो । उनको विवाह १५ वर्षको उमेरमा एक सैन्य अधिकारीसँग भयो । श्रीमानको युद्धमा मृत्यु भएपछि उनले हँगेरीका काउन्टस म्याथिअससँग विवाह गरिन् ।
बेथरीले इङ्ल्याण्डमा सन् १६०९ सम्म ६०० बढी युवतीको रगतले स्नान गरेको आरोप छ । किशोरी युवतीको रगतले स्नान गरेमा रुप र यौवन सदावहार हुन्छ भन्ने भ्रम पालेकी बेथरीले ग्रामीण किशोरीलाई आफ्नो निशाना बनाएकी थिइन् । जो महलमा सभ्य चालचलन र संस्कार सिक्न आउँथे । ग्रामीण किशोरीको रगतले स्नान गर्दा आफ्नो रुपमा परिवर्तन नआएपछि उनले सहरी उच्च कूलका किशोरीको रगतले स्नान गर्न थालिन् । उनलाई यो अपराध कर्ममा लाग्न डोरोटा जेन्टसले सघाउने गर्थिन् जो सेविका थिइन् । उनी बेथरीको विश्वास पात्रसमेत थिइन् ।
६ वर्ष निरन्तर किशोरीको रगतले स्नान गर्ने र रगत पिउने गरेकी बेथरीको भेद त्यतिबेला खुल्यो जब हँगेरियन राजा मथियस दोस्रोले आफ्नो उच्च पदको प्रतिनिधि गार्जी थुर्जुलाई उनका विरुद्धको आरोप लगाई अनुसन्धान गर्न पठाए । थुर्जुले अनुसन्धानका क्रममा ३ सय साक्षीबाट उनका विरुद्ध अति अमानवीय क्रुर आरोप लगाएको पाए । बेथरीले पीडित किशोरीहरुलाई तातो आइरनले पोल्ने, नङको कापमा सियोले घोच्ने, शरीरमा बरफ खन्याएर मर्न बाध्य पार्ने, शरीरलाई महले ढाक्ने ताकि कीराले छालामा असर पु¥याउन नसकोस् , दुई ओठ सिउने, अनुहार र छातीको मासु खाने गरेको जस्ता कुकर्म गरेको आरोप पाए ।
६ वर्षसम्म कुमारी केटीहरुको रगतले नुहाउने र रगत पिउने बेथरीलाई अपराधको भेद खुले पनि सजायँ दिन कठिन थियो । उनीमाथि सिधै सरकारी मुद्दा चलाउन सकिँदैनथ्यो । तसर्थ कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गरियो । कानुनमा परिवर्तन गरेसँगै उनलाई पक्राउ गरियो । उनलाई झ्याल ढोका बन्द भएको कोठामा राखियो जुन गन्हाउने थियो । दिशापिसाबलाई समेत बाहिर निस्कन नपाउने गरी थुनियो र फाँसीको सजायँ सुनाइयो । सन् १६१४ मा उनलाई फाँसी दिइयो । उनको लासलाई खुला आकाशमुनि राखियो । चिल गिद्दले लुछी लुछी कंकालमात्र रहेको अस्थिपञ्जरलाई लात्ताले हानियो । नागरिकले कंकालमाथि थुके । एउटा कुख्यात अपराधीको अन्त्य भयो ।